Video inay Android-Sida loo Beddelaan Video inay Android Phone
Sida loo saar Video inay Android Phone - Motorola Droid / HTC Hero
> Resource > Android > Sida loo saar Video inay Android Phone - Motorola Droid / HTC Hero
Ma u baahan tahay in ay ku riday video inay phone Android
"Waxaan ku socdaa in ay fasax dheer ka baxsan shaqada aan, iyo waxaan la qorsheeyay safarka ah. Waxaan rabaa in aan u saaray filimada aan jeclaa in aan telefoonka Android, diyaarad si ay u disho mar, laakiin qaabka ay yiraahdaan maya. Barnaamij kasta oo wanaagsan caawin karaa? Thanks badan! "
Laba siyaabood oo aad ku qulquli video inay phone Android
Jidka 1: Beddelaan videos oo wuxuu u geliyey si ay Android phone la Video Converter
Jidka 2: Beddelaan iyo videos in Android phone wareejiyo la MobileGo for Android
Jidka 1: Isticmaalka Video Converter si loogu badalo video in Android
Fiiro gaar ah : Dadka isticmaala Mac, u tag Video Converter u Mac (Snow Leopard, Libaaxa ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa) caawimaad.
Ku rakib iyo bilaabo video in Converter android , ka dibna sida ay talaabooyinka soo socda.
Tallaabada 1. Video Add
Riix Faylal ay dar badhanka si aad ku shuban videos. Waxa kale oo aad ku dari kartaa oo u habayn iyo faylasha iyaga oo jiidayeen.
Tallaabada 2. Dooro Qaabka Output ah
Dooro Android ka Qaabka Output liiska hoos-hoos dhinaca midig, ka dibna ka dooro mid sax ah aad rabto in aad sida qaab saarka video aad. Tusaale ahaan, waxaad tagtaa Device> HTC > Flyer .
Talooyin: Ka hor aad video bilaabo diinta Android, waa ikhtiyaari in astaysto aad videos by falinjeeerka qaybo rabin, lana siii mark ganacsi dhibsado, biirtay video clips ka mid ah galay, iwm Waxaad samayn kartaa video kaamil ah Jidkan.
Tallaabada 3. Start Conversion
Marka aad xaqiijin wax walba u dhacaan sidii aad qorshaynayso, riix Beddelaan . Bar horumarka ayaa ku tusi processing qaab beddelidda doonaa.
Markaasay aad ku raaxaysato kartaa videos on Android dhowr ilbiriqsi gudahood, iyadoo aan loo eegayn waxaad dooneysaa inaad tusto in aad macmiilka ama dilaan aad waqti safarka. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video in ay qaabab kale oo dheeraad ah haddii aad u baahan tahay, sida iPhone, iPad, iPod, YouTube, Facebook iyo iwm
Haddii loo baahdo, guji si aad u daawato video tutorial u tallaabooyin faahfaahsan oo ku.
Jidka 2: Isticmaalka MobileGo for Android inay sii qulquli video in Android ka PC
Free download MobileGo for Android
u rakib iyo tageen sidii talaabooyinka soo socda.
Tallaabada 1. Video Add to Android Phone
Burcad barnaamijka on your computer. Connect aad telefoon kula kombiyuutarka via cable USB ama Wi-Fi. Markaas dooran Videos tab iyo weeraray dar .
Tallaabada 2. Stream Video inay Android Phone ka dib markii diinta
Marka video ah inay telefoonka Android, daaqad yar booda xusuusin ah u beddelaya Android qaab filaayo. riix OK . Markaasaa waxaa u bilaabi doonaan si loogu badalo video ay u MP4. Ka dib qaab beddelidda, video waxaa si otomaatik ah dari doonaa liiska video telefoonka ee.
Streaming video in Android way fududahay. Hadda, aad ku raaxaysan karaan video ku saabsan telefoonka aad Android. Haddii video horeba waa qaab ah in si fiican u habboon telefoonka, tallaabo diinta ka noqon doona si toos ah boodayo iyo videos waxaa si toos ah dari doonaa tilifoon. Multiple videos waxaa taageera si ay u dajiyaan hal mar.
Waxaa intaa dheer, Wondershare MobileGo for Android sidoo kale kaa caawin karaan si ay u gudbiyaan sawiro iyo badalo music inay telefoonka aad Android, iyo sidoo kale xiriir gurmad iyo SMS u dhexeeya aad telefoon iyo computer. Waa tababare fiican hawsha u telefoonka aad Android.
Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka Samsung Phone in Computer
Siri VS Google Hadda VS Cortana: sida u fiican ee
Top 10 Beddelka TiVo App u Android